နိုင်ငံခြားထွက်ကစားမယ့် ပထမဆုံးမြန်မာ e-Sports ကစားသမား | MyTech Myanmar
နိုင်ငံခြားထွက်ကစားမယ့် ပထမဆုံးမြန်မာ e-Sports ကစားသမား
E-Sports လို့ခေါ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်အားကစားဟာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ထည့်သွင်းဖို့တောင် ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ လူငယ်အများစုနှစ်သက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး Competitive ဂိမ်းတစ်ခုကတော့ Dota2ပါပဲ။
မကြာခင်စတင်တော့မယ့် ၂၀၁၈ – ၁၉ Dota2ပရိုဖက်ရှင်နယ်ရာသီအတွက် အခုချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ Dota2အသင်းတွေက ပြင်ဆင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ထူးခြားချက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် Dota2အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Clutch Gamers က မြန်မာ Dota2ကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်ဇော် (InsaNe!) ကိုခေါ်ယူလိုက်ကြောင်း သူတို့ရဲ့ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာ ကြော်ငြာလိုက်တာပါပဲ။
InsaNe! ဟာ လက်ရှိမြန်မာ Dota2လောကမှာ လူသိအများဆုံး Team Veteran အသင်းမှာ Mid-lane Position မှကစားနေတာဖြစ်ပြီး အရှေ့အာရှ (SEA) ဒေသတွင်း Dota2Rank ထိပ်ဆုံးအယောက် ၂၀ စာရင်းဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က Maven မှာကစားခဲ့ပြီးနောက် နာမည်ကြီးမြန်မာအသင်း G7 မှ ကစားသမားဟောင်းတွေနဲ့ လက်ရှိ Team Veteran ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။
ဘောလုံးအားကစားမှာ မြန်မာကစားသမားတွေကို အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်း ကလပ်တွေက ခေါ်ယူကစားနေကြသလိုပဲ၊ E-Sports မြင်ကွင်းမှာလည်း ပထမဆုံးအဖြစ် InsaNe! ဟာ Clutch Gamers အသင်းနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာ Dota2ပြိုင်ပွဲတွေကို ဆော့ကစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာလူငယ်တွေ အတွက်လည်း ဝါသနာပါရာကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ရင်း အောင်မြင်မှု ရနိုင်တဲ့ ဥပမာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Clutch Gamers အသင်းမှာ လက်ရှိ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသား Nikobaby, မလေးရှားနိုင်ငံသား နာမည်ကျော် Dota2ပရို kYxY, အရင်က နာမည်ကျော် Ad Finem အသင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ ဂရိနိုင်ငံသားနှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Skylark နဲ့ SsaSpartan တို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံသား InsaNe! တစ်ယောက် ယှဉ်တွဲဆော့ကစားရမှာပါ။
E-Sports လို့ချေါတဲ့ အီလကျထရောနဈအားကစားဟာ အိုလံပဈပွိုငျပှဲတှမှော ထညျ့သှငျးဖို့တောငျ ပွငျဆငျနကွေပါပွီ။ လူငယျအမြားစုနှဈသကျပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာလူကွိုကျအမြားဆုံး Competitive ဂိမျးတဈခုကတော့ Dota2ပါပဲ။
မကွာခငျစတငျတော့မယျ့ ၂၀၁၈ – ၁၉ Dota2ပရိုဖကျရှငျနယျရာသီအတှကျ အခုခြိနျမှာ နိုငျငံတကာ Dota2အသငျးတှကေ ပွငျဆငျနကွေပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ထူးခွားခကျြကတော့ ထိုငျးနိုငျငံအခွစေိုကျ Dota2အဖှဲ့အစညျး တဈခုဖွဈတဲ့ Clutch Gamers က မွနျမာ Dota2ကစားသမား တဈဦးဖွဈတဲ့ မွငျ့မွတျဇျော (InsaNe!) ကိုချေါယူလိုကျကွောငျး သူတို့ရဲ့ တရားဝငျ Facebook စာမကျြနှာမှာ ကွျောငွာလိုကျတာပါပဲ။
InsaNe! ဟာ လကျရှိမွနျမာ Dota2လောကမှာ လူသိအမြားဆုံး Team Veteran အသငျးမှာ Mid-lane Position မှကစားနတောဖွဈပွီး အရှအေ့ာရှ (SEA) ဒသေတှငျး Dota2Rank ထိပျဆုံးအယောကျ ၂၀ စာရငျးဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ယခငျက Maven မှာကစားခဲ့ပွီးနောကျ နာမညျကွီးမွနျမာအသငျး G7 မှ ကစားသမားဟောငျးတှနေဲ့ လကျရှိ Team Veteran ကိုဖှဲ့စညျးခဲ့တာပါ။
ဘောလုံးအားကစားမှာ မွနျမာကစားသမားတှကေို အရှတေ့ောငျအာရှ ဒသေတှငျး ကလပျတှကေ ချေါယူကစားနကွေသလိုပဲ၊ E-Sports မွငျကှငျးမှာလညျး ပထမဆုံးအဖွဈ InsaNe! ဟာ Clutch Gamers အသငျးနဲ့အတူ နိုငျငံတကာ Dota2ပွိုငျပှဲတှကေို ဆော့ကစားရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ မွနျမာလူငယျတှေ အတှကျလညျး ဝါသနာပါရာကို တစိုကျမတျမတျလုပျရငျး အောငျမွငျမှု ရနိုငျတဲ့ ဥပမာကောငျးတဈခု ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Clutch Gamers အသငျးမှာ လကျရှိ ဘူဂေးရီးယားနိုငျငံသား Nikobaby, မလေးရှားနိုငျငံသား နာမညျကြျော Dota2ပရို kYxY, အရငျက နာမညျကြျော Ad Finem အသငျးမှာကစားခဲ့တဲ့ ဂရိနိုငျငံသားနှဈဦး ဖွဈတဲ့ Skylark နဲ့ SsaSpartan တို့နဲ့အတူ မွနျမာနိုငျငံသား InsaNe! တဈယောကျ ယှဉျတှဲဆော့ကစားရမှာပါ။
MyTech Myanmar2018-09-12T23:33:48+06:30September 12th, 2018|Entertainment, Gaming, Tips & Stories|